Ra’iisal Wasaaraha France Oo Ka Jawaabay hadalkii Ibrahimovic
HomeWararka MaantaRa’iisal Wasaaraha France Oo Ka Jawaabay hadalkii Ibrahimovic
Ra’iisal wasaaraha wadanka Faransiiska, Manuel Valls oo ka hadlay hadallo ka soo yeedhay Ibrahimovic ayaa sheegay in uu ka naxay wax laacibkaas afkiisa ka soo baxay.
Inkasta oo uu Ibrahimovic raalligelin ka bixiyey hadalkiisa uu ku sheegay in waddanka Faransiisku aanu ahayn meel fiican oo ku habboon kubadda, isla markaana ka dhintay dhinaca garsooreyaasha kaas oo aanay kooxda uu u ciyaaro ee PSG u qalmin in ay dalkaas ka dhisnaato, ayaa haddana waxa hadalkiisaas ka abuurmay cadho badan oo ay ka qaadeen dalka dadkaas, kuwaas oo hormoodkooda iyo siyaasiyiinta ugu caansani ay ka jawaabeen.
Wasiirka ciyaaraha, guddoomiyeyaasha axsaabta mucaaradka iyo shakhsiyaad kale oo dalkaas laga ixtiraamo ayaa dhalleeceeyey hadallada Ibrahimovic.
Ra’iisal wasaaraha Faransiiska Manuel Valls oo isaguna maanta la hadlay Grand Journal ayaa sheegay in ay naxdin ku noqotay warbixinta lidka ku ah garsooreyaasha Faransiiska ee uu bixiyey Ibrahimovic.
“Way iga nixisay warbixinta garsooreyaasha Faransiiska lidka ku ah, waxaase waajib ku ah ciyaartoyga in uu ogolaado in uu mar walba si habboon u dhaqmo. Ibrahimovic wa in uu ogaado in kelmad kasta oo afkiisa ka soo baxda la tirinayo wakhtiyada murankan oo kale jiro. Qof walba dulqaadka ayaa ka taga mararka ay waxan oo kale dhacaan.” Sidaas ayuu yidhi Ra’iisal wasaaraha dalka Faransiiska Manuel Valls.
Xidhiidhka kubadda cagta ee Faransiiska ee French Football Federation (FFF) ayaa Isniintii xaqiijiyey in ay bilaabeen baadhitaan lid ku ah Ibrahimovic kaas oo ay gunaanadkiisa go’aamo ka soo saari doonaan guddida Akhlaaqadda ee xidhiidhku maalinta Khamiista, waxaana la filayaa in ganaaxyo culus ay ku ridaan Zlatan Ibrahimovic.
Laacibkan oo hore ugu soo ciyaaray Kooxaha Ajex, Juventus, Inter Milan iyo Barcelona aya dhawaan ka soo laabtay ganaax uu ku mutaystay ciyaartoy uu madaxa ku dhuftay.
Turkey: Ciyaartooyada Fenerbahce Oo Rasaas lagu Weeraray Iyo Dhaawac Cisbitalka La dhigay
CONIFA Oo Ballan-qaadday Inay Somaliland Ka Taageerayso Ciyaaraha, Garoomada Iyo Farsamada